"Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy … Fa … fony mbola fahavalo … isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany.” Romana 5:8-10
"Isaorana anie Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina.” 2 Korintiana 9:15
Tao anaty lamasinina feno hipoka tany Paris, nitsangana teo an-jorony, nijery ny manodidina ahy. Olona amin’ny sokajin-taona rehetra, samihafa fiaviana, avy amin’ny sikajim-piarahamonina isan-karasany no tafaraka vetivety. Itsy, lehilahy iray mihaja fitafy (afaka nipetraka) miasa eo amin’ny solosainany; ero; olona iray sahirana ka mitantara ny toerana mahonena misy azy, nefa tsy misy miraharaha. Maro ny variana amin’ny zavatra eritreretiny na manahirana azy. Ny sasany hitako mahatehotia; misy hafa, tena tsy tiako mihitsy … Misy izay tsy hasaiko hiantranao any amiko na oviana na oviana!
Tampoka teo dia nisy andinin-Tsoratra Masina tonga tao an-tsaiko: “Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:16)
“Izay rehetra” hoe izany tokoa ve? Tsy misy resaka fari-piainana, na faripahalalana, na fidiram-bola? Tsia! Fa izay rehetra, izany hoe ny olona tsirairay tsy ankanavaka tao anaty lamasinina! Dia azo heverina ve hoe Andriamanitra nanao sorona ny Zanany malalany ho an’ireo olona ireo, tahaka izay nataony ho ahy?
- "Eny! Ary tsy anavahana an’iza na iza io tolotra malalaka io, fa ho an’izay rehetra mino.” Izay mino dia omen’Andriamantra ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay ary toerana any an-danitra, eo anilan’ny Zanany. Tsy hoe taomin’Andriamanitra sy tolorany famelan-keloka fotsiny ireo olona ireo, fa tiany koa hatao zanany. Marina tokoa fa tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra fitiavana ihany no mamelatra tanteraka ny mahantra indrindra aza. Natao ho ahy sy ho anao ny fanomezan’Andriamanitra Asaina ianao, sady irina!
Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy … Fa … fony mbola fahavalo … isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany.” Romana 5:8-10
Isaorana anie Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina.” 2 Korintiana 9:15
Eny! Ary tsy anavahana an’iza na iza io tolotra malalaka io, fa ho an’izay rehetra mino.” Izay mino dia omen’Andriamantra ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay ary toerana any an-danitra, eo anilan’ny Zanany. Tsy hoe taomin’Andriamanitra sy tolorany famelan-keloka fotsiny ireo olona ireo, fa tiany koa hatao zanany. Marina tokoa fa tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra fitiavana ihany no mamelatra tanteraka ny mahantra indrindra aza. Natao ho ahy sy ho anao ny fanomezan’Andriamanitra Asaina ianao, sady irina!